Uyaqhubeka | News24
Umculi uMlindo the Vocalist ISITHOMBE: SITHUNYelwe
EMVA kwesimemezelo sokuthi uyaqhubeka umcimbi we-Ugu Arts Jazz Festival kulonyaka, abalandeli abapholisanga maseko ekuthengeni amathikithi enani eliphansi abizwa ngokuthi ama-early bird tickets, okungama thikithi athengwa yilabo abathanda ukuzilungiselela kusenesikhathi. Kubikwa ukuthi kuyimanje abalandeli bafuna ukuthenga amathikithi ebantwini nase sangweni lase- Ugu Sports and Leisure. Okhulumela iCyassounds Holdings, ehlele lomcimbi uNks Nana Blose, uthe amathikithi athengwe ubuthaphu thaphu. “Besinamatikithi abedayiswa ngesaphulelo kulabo abathenge kusenesikhathi, lawo mathikithi abenqunyelwe isikhathi sokuthi azobe engasadayisi uma kuqala inyanga kaNhlaba (May), kodwa indlela okwenzeka ngayo sibone kungcono ukuthi selule isikhathi sokudayiswa kwalamatikithi,” kusho uNks Blose. “Okwamanje singasho ukuthi sesinabo abaculi abathe nakanjani bazoba yingxenye ye-Ugu Jazz Arts Festival, kubalwa u-Oliver Mtukudzi, uZonke, uSelaelo Selota, uMlindo The Vocalist owaziwa ngeculo lama Blesser. Abanye sizobadalula ngokuhamba kwesikhathi,” kusho uNks Blose.
UNks Blose ukhuthaze abalandeli ukuba baphuthume bethenge amathikithi e-Computicket. Uthe: “Amathikithi e-general angu-R280 kodwa leli elinesaphulelo lona le-general lingu R200. Ithikithi le -golden circle ungalithola ngo R350 kanti ele-VIP liwu-R1200.”